13.3 tapitrisa tonga eropeana hitondra ny fanarenana ny fizahan-tany any Golfa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » 13.3 tapitrisa tonga eropeana hitondra ny fanarenana ny fizahan-tany any Golfa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahrain • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Koety • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Oman Vaovao Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Arabia Saodita • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany UAE
13.3 tapitrisa tonga eropeana hitondra ny fanarenana ny fizahan-tany any Golfa.
Ireo firenena ao amin'ny GCC dia misy ny Emira Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Qatar, Oman, Koety ary Bahrain ary samy manolotra karazana safidy sidina sy vokatra fizahan-tany isan-karazany izy rehetra, izay mahasarika ireo mpandeha eropeana.
Ireo mpitsangatsangana eropeana no ho mpamily fototra amin'ny fanarenana fizahan-tany any amin'ny faritra GCC avy amin'ny COVID-19.
Tamin'ny taona 2019 dia tonga mpizahatany 11.8 tapitrisa ireo tonga mialoha ny areti-mandringana avy tany Eropa nankany amin'ireo firenena GCC.
Ny fahatongavan'ireo tazo taorian'ny valan'aretina dia vinavinaina ho sitrana amin'ireo mpizahatany 13.3 tapitrisa amin'ny 2024, tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 17.5%.
Ireo mpivahiny eropeana dia kasaina ho lasa tsena loharano lehibe ho an'ny faritry ny Golfa, indrindra Filankevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa (GCC) firenena, izay hanampy ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany. Ireo firenena ao amin'ny GCC dia misy ny Emira Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Qatar, Oman, Kuwait ary Bahrain ary samy manolotra karazana safidy sidina sy vokatra fizahan-tany isan-karazany izy rehetra, izay mahasarika ireo mpandeha eropeana.
Ny angon-drakitra farany momba ny indostria dia nanambara fa tamin'ny taona 2019 dia tonga mpizahatany 11.8 tapitrisa ny fahatongavan'ireo olona mialoha ny areti-mandringana avy any Eropa ka hatrany amin'ireo firenena GCC. Tamin'ny taona 2020, ny olona tonga dia nilatsaka tamin'ny 3.9 tapitrisa noho ny areti-mandringana, ny fihenan'ny 67% isan-taona (YOY), na izany aza, vinavinaina ny fahatongavan'ireo olona tonga 13.3 tapitrisa mpizaha tany tamin'ny 2024, taha mitombo isan-taona (CAGR ) an'ny 17.5%.
Raha jerena ny haavon'ny fitomboana antenaina amin'ireo mpitsangatsangana eropeana tonga ao GCC firenena ao anatin'ny telo taona ho avy, izy ireo no ho mpamily fototra amin'ny fanarenana fizahan-tany avy amin'ny COVID-19. Firenena iray manan-danja manokana amin'ny faritra dia ny UK satria ny vinavinan'ny indostria farany dia mampiseho fa ny fahatongavan'i UK any amin'ny firenena GCC dia hahatratra 3 tapitrisa amin'ny 2024 amin'ny CAGR 21.7%.
UK nahasarika olona foana ny mpandeha GCC firenena rehefa manolotra tolo-kevitra fizahan-tany isan-karazany ho an'ny masoandro fahavaratra sy ririnina, miaraka amoron-dranomasina mahavariana, tanàna marobe ary hetsika atao. Ny fahamendrehana sy ny satan'i Dubai miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny lafo vidy sy ny traikefa lafo vidy natolony dia malaza amin'ny mpandeha UK ihany koa.
Ireo firenena manerana ny GCC dia manana fomba maro hitaona ny eropeana, miaraka amina hetsika isan-karazany manomboka amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina nentim-paharazana ka hatramin'ny traikefa ara-kolotsaina nomen'ny faritra fomban-drazana sy tantara. Izany dia hanampy azy io hamerina ny lazany haingana kokoa noho ireo toerana itodiana izay manolotra traikefa fitsaharana tanàna fotsiny.